I-Baked macaroni ne-béchamel, isidlo esilula se-pasta | Ukupheka Kwekhishi
I-Baked macaroni ne-béchamel, isidlo esimnandi se-pasta wonke umuntu azothanda, kulula ukusilungisa. I-pasta ebhakwe ene-béchamel yinto yakudala emakhishini ethu, uma indlu ngayinye iyilungiselela ngendlela ethanda ngayo nangokunambitha komndeni wethu.
Este dish kungenziwa futhi njengokusetshenziswa, njengoba ingenziwa nge-pasta esele esishiye kwenye iresiphi, futhi nenyama egayiwe esele noma ama-meatballs asele ...
300 gr. inyama exubile (yenkomo-ingulube)
Imbiza katamatisi othosiwe
Into yokuqala ukubeka i-pasta ukupheka, sibeka i-macaroni ngamanzi abilayo, ngosawoti omncane.
Epanini lokuthosa sizofaka u-anyanisi oqoshiwe bese sibeka inyama egayiwe.
Lapho sibona ukuthi inyama seyivele ikhululekile futhi ithatha umbala, sizobeka usosi katamatisi othosiwe, ungazenzela noma uthenge, usawoti omncane nopelepele sizoyivumela ipheke phezu komlilo ophakathi.
Ngemuva kwemizuzu eyi-10 unambitha usawoti bese uwubeka ngokuthanda kwakho.
Uma kuyi-macaroni, uwafaka ukuze ukhiphe kahle bese siwaxuba nenyama, siyibeke kuthileyi wokubhaka.
Silungisa i-bechamel, epanini noma epanini lokuthosa sibeka ibhotela emlilweni ophakathi.
Lapho selincibilikile, sizofaka ufulawa, sigovuze kahle futhi siwuyeke upheke uthathe umbala omncane.
Sizothela ubisi kancane kancane, esizobe sishisa ngalo ngaphambili kwi-microwave futhi ngeke siyeke ukugovuza ngenduku.
Sizofaka usawoti kanye ne-nutmeg. Lapho sincane futhi ngokuthanda kwethu, sizolunga.
Uma yenza izigaxa ngofulawa, dlulisa i-blender futhi kuzolunga.
Simboza i-pasta ngososo noshizi omncane ogayiwe, sikufake kuhhavini bese sikushiya size sibe nsundu ngegolide.
Sikhonza kushisa kakhulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Abangane » Okufakiwe Okushisayo » Imakharoni ebhakwe nge-béchamel
Ama-Puff pastry rolls